Iray volana katroka tany am-ponja Navoakan’i Andry Rajoelina i Arphine
Sambava Niakaran’ny voay ny lapan’ny Tanàna
Tonga amin’ny ara-bakiteny hoe nikoropaka ny tao an-dapa ny zava-nitranga tao amin’ny lapan’ny tananan’I Sambava ny sabotsy teo.
Behenjy Fiara kely tratra nitondra olona an-tsokosoko
Misy hatrany ny olona mivoaka an-tsokosoko ny faritra misy azy amin’izao. Fiara kely iray indray no saron’ny mpitandro ny filaminana tao Behenjy saika hivoaka
Mafampana ny ao Toamasina Nohadihadian’ny zandary ny Pr Ralandison
Nampanantsoin’ny sampana misahana ny heloka bevavan’ ny zandarimariam-pirenena omaly maraina nohadihadiana momba ny fahafatesan’i Dr Daniel ny alahady 24 mey teo ny Pr Ralandison Stéphan Lehiben’ny CHU Toamasina sady Sojaben’ny Fakioliten’ny Fitsaboana any an-toerana.
Analanjirofo Nodimandry tampoka ny lehiben’ny faritra
Misaona ny faritr’Analanjirofo satria dia nodimandry omaly maraina ny lehiben’ny faritra vonjimaika, Honoré Tsaramandihy.
Fankalazana ny fetim-pirenena Tsy azon’ ny rehetra hatrehina
Noho ny fiparitahan’ny tsimok’aretina Covid 19 eto amintsika sy ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra dia fantatra fa tsy azon’ny rehetra hatrehina toy ny isan-taona ny fankalazana ny fety amin’ity taona 2020 ity.
Orinasa Ambatovy Mpiasa 850 handao an’i Madagasikara
Nianga omaly tao Toamasina ireo vazaha mpiasan'Ambatovy. Fiaramanidina miisa telo an’ny Tsaradia, rantsan’ny kaompania Air Madagascar no naka azy ireo tao Ambalamanasa nihazo an’Antananarivo, avy eo mandray ny sidina manokana mankany ivelany.
Ikongo Foto-drafitrasa vita tamin'ny fanjanahantany no betsaka
Mbola foto-drafitrasa vita tamin'ny andron'ny fanjanahantany teto amintsika no betsaka mitsangana any amin'ny distrikan'Ikongo V7V misy anay, hoy ny depiote Razafitsiandraofa Jean Brunel
Niarahaba ny mpanao gazety noho ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety omaly 3 mey ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina.
Nitondra hanatranatra, ary nanambara fa nandray fanapahan-kevitra ho an’ny mpanao gazety diso làlana. Amin’ny maha Filoham-pirenena ahy, dia nandray fanapahan-kevitra famoahana ny mpanao gazety izay any am-ponja aho. Tsy natao hanenjehana na hitsikerana fiainan’olona manokana ny asa fanaovan-gazety, hoy ny filoha. Havoaka ny fonja izany i Arphine Rahelisoa, izay efa hatramin’ny 2 aprily no nohenjehina, ary ny 4 aprily no nadoboka teny Antanimora, ka nanao ny fetin’ny paska tany an-tranomaizina.